हाते कागज निर्यातमा वृद्धि
नेपालमा उत्पादन हुने हाते कागज निर्यात ३ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा रू. १८ करोड ३२ लाख २ हजार बराबरको हाते कागज निर्यात भइसकेको छ । गत वर्ष रू. १८ करोड ६७ लाख ५ हजार बजारको हाते कागज निर्यात भएको नेपाल हस्तकला महासंघले जानकारी दिएको छ ।
युरोपियन युनियनमा नेपाली हाते कागजको ट्रेडमार्कमा निर्यात हुन्छ । चालू आवको ९ महिनामा अमेरिकामा मात्रै रू. ३ करोड ९५ लाख ५७ हजारको हाते कागज निर्यात भएको महासंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अमेरिकामा भने नेपाली हाते कागजको ट्रेडमार्क दर्ता छैन । यसका साथै नेपालले जर्मनी, बेलायत, जापान फ्रान्सलगायत ८० देशमा हाते कागज निर्यात गर्छ ।
हाते कागज उत्पादनका लागि नेपालमा १ सय १० भन्दा बढी उद्योग दर्ता भएको हाते कागज उद्योग संघले बताएको छ । उद्योग दर्ता नगरी घरघरमा समेत हाते कागज उत्पादन हुँदै आएको महासंघका कार्यालय सचिव एलिजा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
‘कागजको निर्यात बढेकाले रोजगारी वृद्धि भएको छ ।’ हस्तकला महासंघका कार्यकारी निर्देशक दिलीप खनालले बताए । हाते कागजको बजार प्रवद्र्धन गर्न सरकारले पहल नगरेको खनालको भनाइ छ । विभिन्न मुलुकमा आयोजना हुने व्यापार मेलामा सहभागी हुनका लागि स्टल राख्ने खर्चमात्र सरकारले उपलब्ध गराए पनि हाते कागज उद्योगलाई ठूलो रहात पुग्ने उनको धारणा छ ।